Hay’adda SIDA oo tuhunsan msuqmaasuq farabadan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Lars Pehrson/TT.
Hay’adda SIDA oo tuhunsan msuqmaasuq farabadan
La daabacay måndag 10 mars 2014 kl 11.22
Hay’adda kaalmada dibedda ee Sida ayaa sannadkii hore baaritaan ku sameeyey ilaa 140 dhacdo oo lagu tuhunsan yahay in si qalad ah loo maareeyey lacag kaalmo dhaqaale. Sidaasina waxay ku qorneyd qoraalkii sannadka ee hay’adda Sida. Tiradaasina waa tiro labaatan dhacdo ka badan tii sannadkii ka horreeyey.
Dhacdooyinka badankood waxay ku saabsan yihiin tuhun laga qabo dembiyo iyo gefaf in hanti kaalmada dibedda loogu talagalay si qaldan loo isticmaalay. Dhacdooyinka la tuhunsan yahayna waxay badankood ka dhaceen qaaradda Afrika.
Charlotte Petri Gornitzka oo ah maareeyaha guud ee hay’adda Sida ayaa sidaas ka tiri:
- Mar walba oo aan ku hawllanahay arrimaha kaalmada dibedda wax badan ayaan ka ogaannaa. Taasina waxay keentaa in aan mar walba dib qiimeyn ugu sameynno habka aan arrimahaan u maareynno, iyo haddii uu yahay hab aan ku qanci karno.
Waxay ahayd sannadkii hore kolkii ay hay’adda Sida dib u la soo noqotay 21.7 milyan oo karoon oo lala xiriiranayo ilaa 21 dhacdo oo kal duwan. Hay’adda ayaa hadda go’aansatay in dardargeliso sidii ay u sameyn lahayd baaritaano kedis ah.